Almaas Elman oo maanta lagu aasayo magaalada Muqdisho. | XAL DOON
Home NEWS Almaas Elman oo maanta lagu aasayo magaalada Muqdisho.
Almaas Elman oo maanta lagu aasayo magaalada Muqdisho.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu socdo qaban qaabada aaska Alle ha u naxariistee Almaas Elman Cali Axmed oo 20-kii bishan lagu dhex dilay gudaha xerada amnigeeda sida weyn loo ilaaliyo ee Xalane.
Meydka Almaas Elman ayaa haatan la geeyay masjidka weyn ee Isbaheysiga Islaamka eek u dhow Madaxtooyada, iyadoo halkaasi la filayo iney Sallaada Janaasada kula tukadaan mas’uuliyiin ka tirsan madaxda dalka.
Intaasi kadib waxaa lagu wadaa in loo qaado qabuuraha lagu aasayo marxuumada oo weerarkeeda u muuqday inuu ahaa mid shirqool ah oo laga soo shaqeeyay, iyadoo lala yaaban yahay sida uu ku yimid toogashadeeda.
Qorshaha ayaa ahaa in xili hore la aaso balse waxaa dib loogu dhigay qaar kamid ah qoyskeeda sida Ilwaad Elman oo ay walaalo yihiin oo wadanka ka maqnaa, waxaana aaska maanta la filayaa iney ka qeyb ahaadaan Mas’uuliyiin Soomaali iyo Ajaanib leh.
Almaas Elman ayaa u geeriyootay xabad haleeshay iyadoo ku sii socotay garoonka Muqdisho, si ay uga duusho, waxaana weerarka ka badbaaday laba Rag ah oo la socday.